Society & Lifestyle | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
News » Society & Lifestyle	3
Posted by osprey on Jun 21, 2010 in News |3comments
။ မြင်ရတာ ပြောပြမယ်။ နားမလည်နိုင်တာလည်းပါတယ်။ ၈ နစ် ပေါင်းလာတယ်။ ကလေး ၁ ယောက်ရတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှ သိရတယ် ။ နောက် တ ယောက် ရှိတယ် ဆိုတာကို ။ သူနဲ့မရခင်ထဲ ကအဲင်္ဒ လူနဲ့ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီ မိန်းမက ၀န်ခံတယ်။ အဲဒီလူကို မပြတ် နိုင်ဘူးတဲ့။ အဲဒီ လူကိုပဲချစ်တယ်တဲ့။ နင်ပြတ်နိုင်လားမေးတော့ ပြတ် နိူင်တယ်တဲ့။ သူ့ယောက်ကျားက ကျန်တော့ သူငယ်ချင်း။ သူလည်းပဲ ကျန်တော့ သူငယ်ချင်း။ ကလေးမျက်နာ ကြည့်ပြီး ကျန်တော့သူငယ်ချင်းက ဆက်ပေါင်းနေတယ် ။ သူနဲ့ဖြစ်တဲ့သူက သူ့အမျိုးပဲ။ ထောင်ထွက် ၁၀၉.၁၁၀ လက်ကြောမတင်းဘူး။ ကျန်တော့ သူငယ်ချင်းက ဘွဲ့ရ ပညာတက် ၀င်ငွေရှိတယ်၊ ကြာရင် ၃၀၂ ဖြစ်မှာကြောက်ရတယ်။ မိန်းခလေးဘက်က အမျိူးတွေက ကောင်လေးဘက်မှာမရှိဘူး။ အစကတည်းက သူတို့တွေကဖံုးထားကြတာာ။ ပေါ်တော့ ကောင်လေးဘက်မှာမရှိဘုး။ ကောင်လေးသိတဲ့အချိန်မှာ စိးပွားပုက်သွားပြီ။ ကောင်လေးကသံယောဇဉ်ကြှီး တော့ ဆက်ပေါင်းနေတယ်။ ကဲ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုသဘောရလဲ၊
– About osprey
naylinn aung has written7post in this blog.
View all posts by osprey →	Blog
yannaingech says: အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ အဓိကအကျဆုံး အကြောင်းပြချက်က ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမကြားက အချစ်ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 95
onlinezz says: ကြားထဲက ကလေးက သနားစရာ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1
ko latt says: လူ့ကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်တဲ့မိန်းမ၊ အစကတည်းက ကိုယ့်အပေါ် ရိုးသားမှုမရှိတဲမိန်းမ၊ ဒီမိန်းမအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းရမဲ့ကလေးအနာဂတ်မကောင်းဘူး၊ ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်မယ်ဆိုရင်တော့ မှားမယ်ပေါ့၊ ချစ်လွန်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ ကလဲ့စားချေချင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ဆက်ပေါင်းသင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကြားထဲက ကလေးနှစ်ခါနာဖြစ်တော့မှာပဲ။
Log in to Reply	-4	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postအိပ်မက်မင်းသမီး - ဦးကြောင်ကြီးအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - ရာမည - ဦးကြောင်ကြီးအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ကြောင်ဝတုတ် - Munetezသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - ရာမညလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - Mobile13 - padonmarဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရာမည - Kaung Kin Pyarလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - Ma Maဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - Kaung Kin Pyar - အလင်း ဆက်နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Ei Kyipyar - ko pauk mandalayတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - ဦးကြောင်ကြီး - TNAရထား ထွက်တော့ မယ် - Moe Z - padonmarသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - အလင်း ဆက်အမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - ရွှေတိုက်စိုး - padauk moeမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - N@ng Ghi Ghi Joe Zအဟံ ပထမံ - padonmar - padonmarရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - padonmar - Traditional MedicineCongress - ကထူးဆန်း - Traditional Medicineဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - Aung Myat Lin - kyeemiteသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - Mobile13ဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - Mobile13 - မောင် ပေပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - Hnin Ei - Ma Eiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - TheWinner Getprizeကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဦးဦးပါလေရာမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - panpanEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77886 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66736 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58678 Kyats )MaMa (57818 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews
နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ Tags2010